प्रा. कृष्ण खनाल - कान्तिपुर समाचार
अदालतको अवहेलना : औचित्य र प्रयोग
अहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति विवाद र अदालतको मानहानि चर्चाको शिखरमा छ । यो स्वाभाविक पनि हो, जब मुलुकको प्रधानन्यायाधीशकै उमेरका फरक–फरक तिथिमिति पाइन्छन् भने ।
आकार लिन नसकेको मधेसी राजनीति
आश्विन १, २०७४
मधेसी राजनीतिको केन्द्र मानिने प्रदेश–२ मा स्थानीय चुनावका लागि भोलि असोज २ गते मतदान हुँदै छ । मनोनयनदेखि प्रचारप्रसारलगायत काम सकेर उम्मेदवार/पार्टीहरू यतिखेर मौन अवधि भए पनि आआफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न अन्तिम तयारी गरिराखेका होलान् ।
स्थानीय सरकार : अधिकार कि पर्खाल ?
नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश २ मा बाहेक अन्यत्र सबै ठाउँमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचित सरकारले कामसमेत थालिसकेका छन् ।
प्रा. कृष्ण खनालका लेखहरु :
राष्ट्र/राज्य : इतिहास र यथार्थ
युग पाठकले आफ्नो नयाँ कृति ‘माङ्गेना’ नाम दिइएको नेपाल मन्थन विषयक पुस्तकमा इतिहासको गहिरो उत्खनन गरेका छन् । उनको निचोड छ, नेपाल काठमाडौं उपत्यकामा विकसित एउटा सभ्यता हो । चार–पाँच दशक अघिसम्म यसको नाम र नक्सा मेल खाँदैनथ्यो ।
तीन दशकपछि फेरि गोर्खाल्यान्ड
सोचेकै थिइनँ, आजको लेख भारतको दार्जिलिङमा जारी गोर्खाल्यान्डका विषयमा हुन्छ भनेर । स्थानीय चुनावकै सेरोफेरोमा लेख्न सोच्दै थिएँ । त्यहाँ आन्दोलन चर्किंदै गर्दा कफी गफमा मच्चिने साथीहरूसँग पनि म संलग्न हुन्नथेँ ।
मोदी बस, भारत र नेपाल
गएको साता केही दिन भाइको उपचार सिलसिलामा भारतको राजधानी दिल्लीमा बित्यो । उत्तर प्रदेश लगायत प्रान्तीय चुनावमा अपेक्षाभन्दा ठूलो सफलता मिलेपछि भाजपा सरकारका तीन वर्ष भनेर जताततै पोस्टरले रंगिएको थियो, नयाँदिल्ली ।